I Faure Gnassingbé
i Faure Essozimna Gnassingbé, teraka tamin'ny 6 Jiona 1966 tany Afagnan, Togo, dia mpanao mpolitika togoley, anisan'ny zanaky ny filoha taloha Gnassingbé Eyadéma, filohan'ny repoblika tamin'ny 7 hatramin'ny 25 Febroary 2005, ary mbola niverina lasa filoha tamin'ny 4 Mey 2005 hatramin'izao. « Lany » filoha indray izy tamin'ny 4 Martsa 2010.
i Faure Gnassingbe dia nandinika ny toe-karena sy ny fitantanana tany ami'nny Oniversite Paris-Dauphine ary nahazo MBA tany amin'ny Oniversite George Washington. Na dia izany, betsaka ny olona tsy mino ny diany tany amin'ilay oniversite amerikanina satria tsy misoratra eo amin'ny anoera ofisialin'ny mpianatra taloha ny anarany. Depiote tao amin'ny antenimiera togoley izy ho an'ny fizaramparitan'i Blitta, ny faritra iavian'ny reniny, mitondra ny etikety ny antoko tokana, ny RPT na Rassemblement du Peuple togolais.
Tamin'ny Oktobra 2021, nahazo ny fanavahana "HeForShe" tamin'ny Women Women i Faure Gnassingbé tamin'ny zoma noho ny politikany hampiroborobo ny vehivavy, sy ny fitovian'ny lahy sy ny vavy ary ny fitoviana, hoy ny vavahadin'ny governemanta République Togolaise. HeForShe (Lui pour Elle) dia hetsika firaisankina manerantany izay tarihin'ny UN Women ho an'ny fitoviana sy fitoviana miralenta kokoa. Ny zoma dia nahazo ny fanavahana 'HeForShe' tamin'ny UN Women, noho ny politikany hampiroborobo ny vehivavy, ary ny fitovian'ny lahy sy ny vavy sy ny fitoviana, hoy ny vavahadin'ny governemanta Repoblikan'i Togolese. HeForShe (Him for Her) dia hetsika firaisan-kina eran-tany tarihin'ny UN Women ho an'ny fitoviana sy fitoviana miralenta kokoa.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Faure_Gnassingbé&oldid=1039036"
Mpanao politika togoley
Voaova farany tamin'ny 17 Oktobra 2021 amin'ny 13:15 ity pejy ity.